Real Madrid Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Alaves, Hoggaanka La Liga Oo Ay Gacanta Ku Dhigeen & Natiijada Kulanka Barcelona Iyo Atletico Oo Laga War Sugi Doono. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Alaves, Hoggaanka La Liga Oo Ay Gacanta Ku Dhigeen & Natiijada Kulanka Barcelona Iyo Atletico Oo Laga War Sugi Doono.
Kooxda Real Madrid ayaa guul kasoo gaadhay dhigeeda Alaves kulan xiiso badan, Kulankan ayaa ahaa mid ay Los Blancos 2-1 ku guuleysteen iyagoo goolasha ka helay daafacyadooda Sergio Ramos iyo Dani Carvajal halka goolka Alaves uu rigoore ku dhaliyay Perez.
Guushan ayaa la micno ah in Madrid ay hoggaanka horyaalka lasii wareegtay isla markaana ay haatan saddex dhibcood ka sarreeyaan Barcelona oo habeen dambe kulan adag booqanaysa Atletico Madrid.
Sidii la filayay kulankan ayaa ku bilaabmay iyadoo ay kubadda haysato kooxda martida ahayd ee Real Madrid, Fursadii ugu horreysay ee halis ah ayaa timid daqiiqadii 18-aad ee kulanka, Isco oo baas ka helay Carvajal ayaa xerada ganaaxa dhexdeeda ka darbeeyay kubadda balse dul mariyay birta goolka.
Markale Madrid ayaa qarka u fuushay inay hoggaanka kulanka la wareegto, Gareth Bale ayaa daqiiqadii 27-aad meel kaliya lix yaardh u jirta kubad halis ah kaga laagay goolka Alaves balse goolhayaha ayaa badbaadin sameeyay.
Alaves ayaa markeeda fursad abuuratay, Laguardia ayaa kubad koorne ahayd soo tuuray waxaana helay Navarro kaas oo xerada ganaaxa dhexdeeda kubadda ka laagay balse hareer mariyay goolka Real.
Qaybta hore ee kulanka ayaa ku dhammaatay bar-bardhac goolal la’aan ah oo ay labada dhinac isku mari waayeen, Real ayaa inta ugu badan maamulka kubadda haystay halka Deportivo Alaves ay shabaqeeda ilaalintiisa awooda saaraysay.
GOOAL: Real Madrid ayaa gool u sariftay fursadii ugu horreysay ee qaybta dambe, Toni Kroos ayaa kubad qalad ah oo loo dhigay Madrid soo tuuray waxaana madax ku darbeeyay kabtan Sergio Ramos oo xagal hoose oo adag ka dhaliyay kubadda.
RIGOORE: Xiddigii hoggaanka u dhiibay Madrid ee Ramos ayaa markan qalad ku galay weeraryahanka Alaves ee Joselu taas oo sababtay in rigoore lagu abaalmariyo kooxdaas.
GOOAL: Weeraryahankii hore ee Arsenal ee Lucas Perez oo xilli ciyaareedkan wacdarro u dhigaya Alaves ayaa rigoorahaas gool u bedelay kulankana ka dhigay mid 1-1 ah.
GOOAL: Markale Real Madrid ayaa hoggaanka kulanka soo ceshatay, Isco ayaa kubad karoos ahayd oo ka timid garabka bidix meel aad u dhaw madaxa kaga darbeeyay kubadda balse goolhayaha ayaa celiyay, Dani Carvajal ayaa awood u yeeshay inuu kubadda soo noqotay goolka oo banaan diilinta dusheeda kaga celiyo.
Alaves ayaa markii hoggaanka dib loogala wareegay soo qaaday weeraro ay goolka bar-bardhaca ku doonayso, Duarte ayaa kubad koorne ahayd oo uu soo tuuray Vidal madaxeeyay balse dhinac mariyay birta goolka.
Markale Alaves ayaa ku dhawaatay inay goolka bar-bardhaca la timaado, Manu Garcia ayaa kubad sarre oo ka timid Perez diilinta lixda Yaardh ku helay isaga oo madaxa ku galay balse goolhaye Areola ayaa markale bad-baadin sameeyay.
Ugu dambayn kulankan ayaa kusoo dhammaaday guul muhiim ah oo ay gaadhay Real Madrid taasoo ka caawisay inay sii qabato hoggaanka La Liga.